Iran iyo wakaaladda quwadda atoomikada oo markale wadahadal yeelanaya toddobaadkan – SBC
Iran iyo wakaaladda quwadda atoomikada oo markale wadahadal yeelanaya toddobaadkan
Posted by Webmaster on Juun 5, 2012 Comments
Vienna:- Agaasimaha guud ee wakaaladda quwadda atoomikada adduunka marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IAEA ninka lagu magacaabo Yuukiya Amano ayaa sheegay in wareeg kale oo wadahadalo cusub ah oo u dhexeeya Iran iyo wakaaladda ay dhici doonaan toddobaadkan si loo gaaro heshiis ku aadan dib u ambaqaadida baaritaanada hakadka ku yimid muddada dheer ee ku aadan barnaamijka nuclear-ka Iran.
Agaasimaha ayaa shaaca kaqaaday in kulanka Iran iyo wakaaladda uu kadhici doono 8 June xarunta wakaaladda ee ku taal magaalada Vienna ee dalka Austria .
Waxaa xusid mudan in agaasimaha wakaaladda atoomikada caalamka uu booqasho lama filaan ah ku tagay bishii la soo dhaafay halkaasi oo uu ka sheegay in heshiis dhowaan la saxiixi doonaan xukuumadda Iran.
Wadahadalka labada dhinac ayaa ku soo beegmaya xilli wadaadka ugu sareeya dalka Iran Aaytullah Cali Khaamanee uu ku eedeeyey dowladda mareykanka iyo xulafadeeda in ay ka been sheegayaan arrimaha ku aadan barnaamijka Nuclear-ka dalka Iran si ay bulshadooda uga weeciyaan mushkilada dhaqaale ee kajirta dalalkooda.
Khudbad uu baahiyey TVga qaranka Iran xuska 23 dhimashada aasaasihii jumhuuriyadda Islaamiga Aayatullah Alkhumeeni ayuu ku sheegay in waxa reergalbeedka iyo mareykanka ay sameenayaan ay tahay doqonimo, waxa ay buunbuuninayaa arrimaha nuclear-ka dalka iran si ay u qariyaan mushaakilkooda.
Wadaadka ayaa intaas ku daray in qadiyada nuclear-ka Iran ay tahay mowduuc ku socda horumarka aqooneed balse reer galbeedku ay ku sheegayaan erey bixin hubka nuclear-ka si-ay uga jeediyaan indhaha dadka mushaakilada gudaha mareykanka iyo qaaradda yurub..